သင်္ကြန်မှာရေဆော့ရင်း ဖုန်းထဲရေဝင်သွားတဲ့အခါ ပျက်စီးမှုနည်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ - For her Myanmar
ရေစိုနေတဲ့ဖုန်းတွေကို ပျက်စီးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် အရေးပေါ်ပြုလုပ်နည်းလေးတွေကို ဖြူသန့်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ အရေးပေါ်နည်းတွေထဲမှာ မှားယွင်းတဲ့အယူဆများလည်း ရှိပါတယ်။ ရေစိုထားတဲ့ဖုန်းတွေကို ဆန်အိုးထဲထည့်တာက မှားယွင်းနေပါတယ်ဆိုတာ ယောင်းတို့ မထင်ထားဘူးမလား။ ဆန်အိုးထဲက ဆန်အမှုန်လေးတွေ၊ ဆန်အကွဲစလေးတွေက ဖုန်းထဲဝင်သွားရင် ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်နော်။ ပြီးတော့ ရေစိုတဲ့ဖုန်းကို ဆံပင်အခြောက်ခံစက်လိုမျိုးနဲ့ရေခြောက်အောင်မှုတ်တာတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရေတွေက ရေငွေ့ပျံပြီး ဖုန်းအတွင်းပိုင်းမှာ ကပ်ကျန်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဖုန်းရေဝင်သွားလို့ ဆိုင်သွားမပြခင် အရေးပေါ်ပျက်စီးမှုနည်းအောင်ပြုလုပ်နည်းလေးတွေကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
ရေစိုသွားတာသိသိချင်း ဖုန်းကိုချက်ချင်းပိတ်သင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဖုန်းအတွင်းပိုင်းက ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပိတ်ထားပေမဲ့လည်း အထဲက စက်ပစ္စည်းတွေက အလုပ်လုပ်နေလို့ပါ။ ဖုန်းပါဝါပိတ်လို့မရတဲ့ အချိန်ဆိုရင်တော့ ဒီတိုင်းထားလိုက်ပါ၊ ပါဝါမလာလို့ဆိုပြီး ခဏခဏဖွင့်တာတွေကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင် ဖုန်းအထဲက ရေစိုထားတာတွေက ပိုပြီးပျက်စီးစေနိုင်လို့ပါ။
Related Article>>> ဖုန်းဝယ်တဲ့အခါ မဖြစ်မနေ စစ်ကြည့်သင့်တဲ့ အချက်(၄)ချက်
(၂)ဘက်ထရီ ၊ ဖုန်းဆင်းကဒ်တွေ ဖြုတ်ထားပါ။
ဖုန်းဆင်းကဒ်တွေ မပျက်စီးအောင် ဖြုတ်ထားဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။ ဆင်းကဒ်ထည့်တဲ့ ငုတ်လေးတွေက ဆင်းကဒ်တို့၊ SD ကဒ်တို့မဖြုတ်ဘဲထားလိုက်လို့ ရေငွေ့တွေကျန်ခဲ့ရင် ဖုန်းတင်မကဘူး ယောင်းတို့ရဲ့ ဆင်းကဒ်တွေပါ ပျက်စီးမှာစိုးလို့ပါနော်။
ရေထဲကျသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင်္ကြန်တွင်းမှာရေစိုသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းရေဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ တစ်သျှူး၊ခြောက်သွေ့နေတဲ့ အဝတ်စတာတွေနဲ့ တတ်နိုင်သလောက်သုတ်ပေးပါနော်။ ဖုန်းကိုထောင်ထားတဲ့ အနေထားနဲ့ရေတွေကိုသုတ်ပေးလိုက်ရင် ဖုန်းထဲကိုရေဝင်တာ သက်သာစေလို့ ဖုန်းအတွင်းပိုင်း ပျက်စီးမှုနည်းပါးစေမှာပါနော်။
(၄)ရေငွေ့စုပ်တဲ့ Silica gel အထုပ်လေးတွေထဲထည့်ထားပါ။
Silica Gel အထုပ်လေးတွေကတော့ ဝေးဝေးမှာရှာစရာမလိုပါဘူး ။ ယောင်းတို့ဝယ်နေတဲ့ အင်္ကျီတွေ ၊ ဖိနပ်ဘူးတွေနဲ့ တချို့မုန့်ထုပ်တွေမှာပါပါတယ်။ အဲ့ Silica Gel လေးတွေနဲ့ အခြောက်ခံတဲ့နည်းက ရေစိုနေတဲ့ဖုန်းလေးတွေအတွက် စိတ်အချရဆုံးနည်းလမ်းလေးပါ။ ရေစိုနေတဲ့ဖုန်းကို Silica တွေထည့်ထားတဲ့ အလုံပိတ်အိတ်(သို့မဟုတ်)ဘူးထဲကို ၁ရက်လောက်ထည့်ပေးလိုက်ရင် အထဲက ရေငွေ့တွေခြောက်သွေ့စေနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းခြောက်သွားပေမဲ့လည်း Phone Service ကိုသွားပြသင့်ပါတယ်နော်။
Related Article>>> ဖုန်းထဲမှာ လက်လွန်ပြီး မှားဖျက်မိတဲ့ data တွေကိုဘယ်လို ပြန်ရယူနိုင်မလဲ????
(၅) ဖုန်း Service သွားပြပါ။
အပေါ်မှာပြောပြထားတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေက ဖုန်းရေစိုသွားတဲ့ အချိန်မှာ Service သွားဖို့ အဆင်မပြေတဲ့အချိန်၊ ဆိုင်မရှိတဲ့ နေရာဒေသတွေရောက်တဲ့အခါ အရေးပေါ်ပြုလုပ်သင့်တာလေးတွေပြောပြထားတာပါ။ ဖုန်း Service ကို ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆိုင်မှာပြပြီးမှသာ ဖုန်းကိုဆက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ရေခြောက်သွားပေမဲ့လည်း ရေငွေ့တွေကျန်နေတာကို မသိဘဲ ဖုန်းကိုသုံးမိလိုက်ရင်ပိုပြီးတော့တောင် ပျက်စီးစေတာကြောင့်ပါ။
အကောင်းဆုံးကတော့ ရေရှိတဲ့နေရာတွေ၊ သင်္ကြန်ရေပက်ကစားတဲ့နေရာတွေကို သွားမယ်ဆိုရင် ရေစိုခံအိတ်တွေနဲ့ဖုန်းကိုအကွယ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဖုန်းမှာရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေက သန့်စင်ခန်းထဲက ဘက်တီးရီးယားတွေထက်များတယ်လို ဖြူသန့်တစ်ခါကပြောပြထားသလိုပဲ ဖုန်းတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်။
Reference Link>>> Experimac , Finance
ရစေိုနတေဲ့ဖုနျးတှကေို ပကျြစီးမှုအနညျးဆုံးဖွဈအောငျ အရေးပျေါပွုလုပျနညျးလေးတှကေို ဖွူသနျ့ပွောပွပေးခငျြပါတယျ။ အရေးပျေါနညျးတှထေဲမှာ မှားယှငျးတဲ့အယူဆမြားလညျး ရှိပါတယျ။ ရစေိုထားတဲ့ဖုနျးတှကေို ဆနျအိုးထဲထညျ့တာက မှားယှငျးနပေါတယျဆိုတာ ယောငျးတို့ မထငျထားဘူးမလား။ ဆနျအိုးထဲက ဆနျအမှုနျလေးတှေ၊ ဆနျအကှဲစလေးတှကေ ဖုနျးထဲဝငျသှားရငျ ဒုက်ခပေးတတျပါတယျနျော။ ပွီးတော့ ရစေိုတဲ့ဖုနျးကို ဆံပငျအခွောကျခံစကျလိုမြိုးနဲ့ရခွေောကျအောငျမှုတျတာတှေ မလုပျသငျ့ပါဘူး ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ရတှေကေ ရငှေပြေံ့ပွီး ဖုနျးအတှငျးပိုငျးမှာ ကပျကနျြနတေတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ဖုနျးရဝေငျသှားလို့ ဆိုငျသှားမပွခငျ အရေးပျေါပကျြစီးမှုနညျးအောငျပွုလုပျနညျးလေးတှကေို ဝမြှေပေးခငျြပါတယျ။
ရစေိုသှားတာသိသိခငျြး ဖုနျးကိုခကျြခွငျးပိတျသငျ့ပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဖုနျးအတှငျးပိုငျးက ဖုနျးမကျြနှာပွငျပိတျထားပမေဲ့လညျး အထဲက စကျပစ်စညျးတှကေ အလုပျလုပျနလေို့ပါ။ ဖုနျးပါဝါပိတျလို့မရတဲ့ အခြိနျဆိုရငျတော့ ဒီတိုငျးထားလိုကျပါ၊ ပါဝါမလာလို့ဆိုပွီး ခဏခဏဖှငျ့တာတှကေိုမလုပျသငျ့ပါဘူး။ ဒီလိုလုပျလိုကျရငျ ဖုနျးအထဲက ရစေိုထားတာတှကေ ပိုပွီးပကျြစီးစနေိုငျလို့ပါ။
Related Article>>> ဖုနျးဝယျတဲ့အခါ မဖွဈမနေ စဈကွညျ့သငျ့တဲ့ အခကျြ(၄)ခကျြ
(၂)ဘကျထရီ ၊ ဖုနျးဆငျးကဒျတှေ ဖွုတျထားပါ။
ဖုနျးဆငျးကဒျတှေ မပကျြစီးအောငျ ဖွုတျထားဖို့လညျး မမပေ့ါနဲ့။ ဆငျးကဒျထညျ့တဲ့ ငုတျလေးတှကေ ဆငျးကဒျတို့၊ SD ကဒျတို့မဖွုတျဘဲထားလိုကျလို့ ရငှေတှေ့ကေနျြခဲ့ရငျ ဖုနျးတငျမကဘူး ယောငျးတို့ရဲ့ ဆငျးကဒျတှပေါ ပကျြစီးမှာစိုးလို့ပါနျော။
ရထေဲကသြှားလို့ပဲဖွဈဖွဈ၊ သွင်ျကနျတှငျးမှာရစေိုသှားလို့ပဲဖွဈဖွဈ ဖုနျးရဝေငျပွီဆိုတာနဲ့ တဈသြှူး၊ခွောကျသှနေ့တေဲ့ အဝတျစတာတှနေဲ့ တတျနိုငျသလောကျသုတျပေးပါနျော။ ဖုနျးကိုထောငျထားတဲ့ အနထေားနဲ့ရတှေကေိုသုတျပေးလိုကျရငျ ဖုနျးထဲကိုရဝေငျတာ သကျသာစလေို့ ဖုနျးအတှငျးပိုငျး ပကျြစီးမှုနညျးပါးစမှောပါနျော။
(၄)ရငှေစေု့ပျတဲ့ Silica gel အထုပျလေးတှထေဲထညျ့ထားပါ။
Silica Gel အထုပျလေးတှကေတော့ ဝေးဝေးမှာရှာစရာမလိုပါဘူး ။ ယောငျးတို့ဝယျနတေဲ့ အင်ျကြီတှေ ၊ ဖိနပျဘူးတှနေဲ့ တခြို့မုနျ့ထုပျတှမှောပါပါတယျ။ အဲ့ Silica Gel လေးတှနေဲ့ အခွောကျခံတဲ့နညျးက ရစေိုနတေဲ့ဖုနျးလေးတှအေတှကျ စိတျအခရြဆုံးနညျးလမျးလေးပါ။ ရစေိုနတေဲ့ဖုနျးကို Silica တှထေညျ့ထားတဲ့ အလုံပိတျအိတျ(သို့မဟုတျ)ဘူးထဲကို ၁ရကျလောကျထညျ့ပေးလိုကျရငျ အထဲက ရငှေတှေ့ခွေောကျသှစေ့နေိုငျပါတယျ။ ဖုနျးခွောကျသှားပမေဲ့လညျး Phone Service ကိုသှားပွသငျ့ပါတယျနျော။
Related Article>>> ဖုနျးထဲမှာ လကျလှနျပွီး မှားဖကျြမိတဲ့ data တှကေိုဘယျလို ပွနျရယူနိုငျမလဲ????
(၅) ဖုနျး Service သှားပွပါ။
အပျေါမှာပွောပွထားတဲ့နညျးလမျးလေးတှကေ ဖုနျးရစေိုသှားတဲ့ အခြိနျမှာ Service သှားဖို့ အဆငျမပွတေဲ့အခြိနျ၊ ဆိုငျမရှိတဲ့ နရောဒသေတှရေောကျတဲ့အခါ အရေးပျေါပွုလုပျသငျ့တာလေးတှပွေောပွထားတာပါ။ ဖုနျး Service ကို ကြှမျးကငျြတဲ့ ဆိုငျမှာပွပွီးမှသာ ဖုနျးကိုဆကျသုံးသငျ့ပါတယျ။ ရခွေောကျသှားပမေဲ့လညျး ရငှေတှေ့ကေနျြနတောကို မသိဘဲ ဖုနျးကိုသုံးမိလိုကျရငျပိုပွီးတော့တောငျ ပကျြစီးစတောကွောငျ့ပါ။
အကောငျးဆုံးကတော့ ရရှေိတဲ့နရောတှေ၊ သွင်ျကနျရပေကျကစားတဲ့နရောတှကေို သှားမယျဆိုရငျ ရစေိုခံအိတျတှနေဲ့ဖုနျးကိုအကှယျပေးသငျ့ပါတယျ။ ပွီးတော့ ဖုနျးမှာရှိတဲ့ ဘကျတီးရီးယားတှကေ သနျ့စငျခနျးထဲက ဘကျတီးရီးယားတှထေကျမြားတယျလို ဖွူသနျ့တဈခါကပွောပွထားသလိုပဲ ဖုနျးတှကေို သနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးဖို့လညျးမမပေ့ါနဲ့နျော။
Tags: damaged, Drop, in Water, Phone, power Off, To Save, Water, wet
သတိလစ်တော့မယ်ဆို ခံစားလာရတတ်တဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာများနဲ့ ပြန်ကုစားနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ